musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Chekutanga pasipoti isina kwayakarerekera yakapihwa muUS
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • LGBTQ • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Chekutanga pasipoti isina kwayakarerekera yakapihwa muUS.
Nhau idzi dzakauya mwedzi mitatu mushure mekunge Dhipatimendi reHurumende rapa vanhu vekuAmerica sarudzo yekuchinja murume kana mukadzi pamapasipoti avo vasina kuvapa magwaro ekurapa kuratidza shanduko yavo.
Bazi reUnited States of State rakazivisa kuburitswa kwepasipoti yekutanga isina kwayakarerekera kune varume neChitatu.
Dzimwe nyika dzeUS dzinotendera vanhu vasiri mabhinari kuti vazviratidze se'X' pamarezinesi ekutyaira kana mamwe maID.
Gender-neutral IDs yaingova vimbiso imwechete yakaitwa naJoe Biden kunharaunda yeLGBT munzira yemushandirapamwe.
The Dhipatimendi reUnited States yakazivisa neChitatu kuti yaburitsa kekutanga pasipoti yekuUS isina-neutral.
Maererano State DepartmentMutauriri waNed Price, weUS "anoenderera mberi nekutora matanho ekuratidza kuzvipira kwedu mukusimudzira rusununguko, ruremekedzo, uye kuenzana kwevanhu vese - kusanganisira LGBTQI+ vagari vekuUS."
State Department mukuru akati chero munyoreri achakurumidza kusarudza 'X' pachinzvimbo chesarudzo yechirume kana yechikadzi.
Nyaya iyi yakauya mushure memwedzi mitatu State Department yakapa vanhu vekuAmerica sarudzo yekuchinja murume kana mukadzi pamapasipoti avo vasina kuvapa magwaro ekurapa kuratidza shanduko yavo. Panguva iyoyo, Munyori weHurumende Tony Blinken vakati vakuru vakuru vachiri "kuongorora nzira yakanakisa" yesarudzo isiri-binary.
Dzimwe nyika dzeUS dzinobvumira vanhu vasiri mabhinari kuti vazviratidze se 'X' pamarezinesi ekutyaira kana mamwe maID, uye nyika dzakati wandei dzatobvumidza sarudzo yechitatu yechikadzi pamapasipoti. Pakati pavo pane Argentina, Canada, neNew Zealand, nepo dzimwe nyika dzinopfuura gumi nembiri dzichipa mapasipoti echikadzi kune vanhukadzi kana vasiri mabhinari mune mamwe mamiriro. Sarudzo ichaitwa kuti iwanikwe kune vese vanonyorera vekuUS kutanga kwa2022.
Gender-neutral IDs yaingova vimbiso imwechete yakaitwa naJoe Biden kunharaunda yeLGBT munzira yemushandirapamwe. Mushandirapamwe wake wakavimbisawo kuchengetedza "LGBTQ + vanhu kubva kumhirizhonga," kuwedzera dziviriro yepamutemo kune transgender vanhu nekupasisa Mutemo weEquality, uye kupa vechidiki vetransgender mukana wekupinda mudzimba dzekugezera nedzimba dzekuvharira dzavanosarudza.